N'ime usoro ịkpa ihe nke igwe okirikiri okirikiri, mgbe igwe bidoro wee kwụsị, mgbe ụfọdụ a ga -emepụta okirikiri akara kwụ ọtọ n'elu akwa, nke a na -akpọkarị akara nkwụsị. Mmetụta nke akara mgbede na -emetụta ihe ndị a:
1) Enwere oghere n'ihi iyi nke igodo eri eri
2) ọnụọgụ ọnụọgụ dị n'etiti akwa aluminom na -enye nri na eriri ezé dị oke obere, na -eme ka ịmịpụ
3) Nke gbadaa ala nke winder ahụ tọgbọrọ chakoo, na -eme ka akwa ahụ laa azụ; ma ọ bụ enwere nsogbu na nnyefe nke nbudata ahụ, na winder akwa na -ada ada.
4) Kwesịrị ekwesị n'etiti cam track na ọkwá ndị ahụ a kpara akpa ma ọ bụ sinkers Ọ tọgbọrọ chakoo (nhazi nke dị n'etiti egwu cam na agịga na-ejikọ ya na ọkpụrụkpụ agịga na-ejikọ ọnụ, agịga na-ejikọ ọnụ nke ọma, na agịga mkpa dị mkpa ga-adị mfe. ogologo ogologo ogologo ogologo maka cam). Mgbe egwu cam na -afụbiga oke oke na agịga, akwa akwa ahụ ga -adị okirikiri na eriri eri nri ga -atọgbọ mgbe ị na -anya nwayọ; mgbe ị na -anya ọsọ ọsọ, akwa akwa ahụ ga -adị gịrịgịrị na esemokwu yarn rụrụ arụ ga -esi ike.
5) Ọ bụrụ na edozigharị igbe ekwenti etiti, imewe na nrụpụta enweghị ezi uche, ọ na -adịkarị mfe ịkwụsị akara.
6) Otu nsogbu ahụ ga -eme ma ọ bụrụ okpukpu abụọ nke igwe na -akpa akwa dị oke larịị n'etiti nnukwu ngwa tripod ma ọ bụ nnukwu gia efere na pinion gear. Ọ dị mfe ịkpata agịga elu na nke alacylinders ịma jijiji mgbe ị na -amalite ma ọ bụ na -eme braking, nke na -emetụta nsịnye nke agịga dị elu na nke ala.